Madaxweynaha FIFA ayaa sheegay in koobka Carabtu uu noqon doono nooc aan horey loo… – Hagaag.com
Madaxweynaha FIFA ayaa sheegay in koobka Carabtu uu noqon doono nooc aan horey loo…
Posted on 28 Abriil 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Gianni Infantino, Madaxweynaha Xiriirka Caalamiga ee Kubadda Cagta (FIFA) ayaa wuxuu muujiyay kalsoonidiisa in Koobka Carabta ee kooxaha oo ay martigalin doonto Qatar inta u dhexeysa December 1 ilaa December 18 – uu noqon doono nooc aan caadi ahayn.
Madaxweynaha FIFA ayaa ku yiri khudbad uu ka jeedinayay isku aadka koobka kooxaha carabta “waa wax aan ku faraxsanahay in aan ka soo qeyb galo isku aadkan isla markaana aan ka soo qeyb galo xilligan taariikhiga ah.”
Infantino wuxuu yiri, “Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Qatar martigelinta iyo qabashada isku aadka tartanka ee Opera House ee Degmada Dhaqanka (Katara), waxaana u mahadcelinayaa Amiir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani iyo Madaxweynaha Guddiga Olombikada Qatar Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani iyo Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta ee Qatar (Sheikh Hamad bin Khalifa Bin Ahmed Al Thani) iyo dhamaan martida, oo uu ugu horeeyo madaxweynaha AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, wakiilada FIFA, madaxweynayaasha xiriirada Africa iyo Carabta sidoo kale, iyo dhammaan wakiillada 23 kooxood ee Carbeed ee ku matalaya dalalkooda.
Wuxuu intaa ku daray “Nuqulada qeybaha soo socda ee koobka Carabta wuxuu noqon doonaa nooc aan horey loo arag, maxaa yeelay waa midkii ugu horreeyay noociisa ee la qabto iyadoo ay ka qaybgalayaan dhammaan kooxaha Carbeed.”
Wuxuu intaa ku daray, “Tartanku wuxuu markhaati ka noqon doonaa sida uu noqon doono Koobka Adduunka 2022, waxaana u maleynayaa inay wax wanaagsan yihiin marka loo eego u diyaar garowga munaasabadan, Qatar waxay qabatay qeybteeda martigelinta koobka Carabta iyadoo ay kormeerayaan FIFA, waxaanan ku kalsoonahay inay noqon doonto tan ugu fiican uguna quruxda badan dhinac walba.
Madaxweynaha FIFA wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay “Tartanku waa fursad lagu xuso walaaltinimo iyo kalgacal, tanina waa fariinta loo diri karo adduunka oo dhan iyadoo la marayo koobka Carabta, isla markaana nuqulkaani uu noqdo diyaargarowgii ugu fiicnaa ee Koobka Adduunka 2022.